Borrasca Fabien: otu esi kpụọ ya, njirimara ya na mmebi ya. Netwọk Mgbasa Ozi
N'etiti ọtụtụ oke ifufe ndị wakporo peninshula anyị n'afọ ndị na-adịbeghị anya anyị nwere ebili Fabien. Ọ bụ nke isii aha ya bụ oke mmiri ozuzo nke oge 2019-2020. Ọ malitere site na ịdọ aka ná ntị oroma n'ihi oke ifufe siri ike nke mere ọtụtụ ihe ndị dị n'ụsọ oké osimiri na Galicia. Ihe a niile mere n’abalị iri na asatọ n’ọnwa iri na asatọ n’elekere mbụ nke ehihie. Ka oge na-aga, a mere mkpọtụ uhie na oke ifufe ahụ gbasara na Osimiri Cantabrian.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke mmiri Fabien, ka o siri bido na ihe e ji mara ya.
1 Nhazi nke oke mmiri ozuzo Fabien
2 Phenomena na ịdọ aka na ntị nke oké ifufe Fabien
3 Mmetụta ndị isi ọ nwere na Spain
4 Ihe omumu
Nhazi nke oke mmiri ozuzo Fabien
Gafe oke ifufe a mere mkpọchi na Bay Bay Biscay dum na ntụziaka France, na-eme ngwa ngwa. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ Ka ọ na-erule n'isi ụtụtụ nke iri abụọ na abụọ, nkwarụ nile ọ nwere na Spain fọrọ nke nta ka ọ kwụsị. Oké ifufe a malitere n'ime oke ikuku na ikuku mmiri nke gafere Osimiri Atlantic dum. Enwere ike ịsị na e guzobere osimiri nke ikuku, nke mmiri ozuzo juru, mpaghara a nwere oke iru mmiri emeela ifufe Elsa ruo ụbọchị ole na ole gara aga.
Nchọpụta nke oké ifufe ahụ Fabien malitere na 19th na 18: 996 pm nke enwere ike ịchọpụta obere mgbada na ndịda Newfoundland na n'okpuru 24 hPa na etiti ya. Mgbe awa iri abụọ na anọ gachara, n ’elekere isii nke ụtụtụ na abali iri abụọ na abụọ, etiti ajọ ifufe ahụ adịworị adị n’etiti North Atlantic ma nwee omimi na ụkpụrụ nke 970 hPa. Dị ka enwere ike ịtụ anya ya, ọdịda a na nrụgide ga-eme ka oke ifufe dị ike na-esonyere ọdịda.
Site n'inwe ụdị nsogbu a, a ihe mgbawa cyclogenesis. Ọ bụ site n'oge a ka ọ na-aga ngwa ngwa na nduzi Europe wee gbadaa osimiri nke ikuku. Ebe etiti a adịla gburugburu latitude nke 45-50ºN. Ugbua n'ime iri abụọ na abụọ, oké ifufe Fabien gbazere na Netherlands na Denmark.
Phenomena na ịdọ aka na ntị nke oké ifufe Fabien
N'ehihie nke 21st, e nyere ịdọ aka ná ntị ọbara ọbara (nke nwere ọnụ ụzọ nke 140 km / h) na mgbago ugwu nke Coruña na Lugo na ndịda ọdịda anyanwụ nke Ugwu Cantabrian nke Asturias, ma nye ịdọ aka ná ntị oroma na ndị ọzọ nke Galicia, Asturias, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Castilla y León niile. Usoro etiti na ugwu nke Castilla-La Mancha na Eastern Andalusia (ụkpụrụ dị n'etiti 90 na 120 km / h, dị ka obodo ndị kwụ ọtọ), n'etiti 21st n'ehihie na 22 na ọkara nke ụbọchị.
Banyere ihe ndị gbara osimiri gburugburu, Osimiri Cantabrian na ụsọ oké osimiri Atlantic nke Galicia nyere ịdọ aka ná ntị na-acha ọbara ọbara n'ihi na ike ikuku site na ọdịda anyanwụ ruo na ndịda ọdịda anyanwụ nke ike 8-9, yana mpaghara 10, na oke osimiri wee bulie mita 8-9 n'ogologo. Otutu mpaghara ala gbara osimiri okirikiri nke peninshula na agwaetiti Balearic nyere ndụmọdụ banyere oroma maka ịdọ aka ná ntị n'ụsọ oké osimiri. Oke mmiri ozuzo abughi ihe ngosi nke ihe omume a, kama ikuku. N'agbanyeghị nke a, e nyere ụfọdụ ịdọ aka ná ntị na oroma n'ihi mmiri ozuzo a gbakọtara na 12 awa karịa 80 mm, ọkachasị n'akụkụ ugwu nke ógbè Albacete.
Mmetụta ndị isi ọ nwere na Spain
Ozugbo anyị matara otu esi kpụọ ya na ihe njiri mara ya, anyị ga-ahụ ihe mmetụta ọ kpatara na peninsula ahụ. Mmetụta kachasị pụta ìhè nke oke ifufe ahụ bụ n'ihi ebili mmiri siri ike nke metụtara Galicia na mpaghara Cantabrian dum. Karịsịa ebili mmiri ahụ bụ ifufe siri ike, gụnyere ọtụtụ n'ime ha ajọ ifufe. Mmiri ndị a na-emetụta akụkụ dị ukwuu nke peninshula, tumadi n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ na agwaetiti Balearic.
N'adịghị ka ihe mere ifufe mbu Elsa, enweghị ọnwụ ọ bụla nwere ike jikọta ya na ịgafe oke mmiri ahụ Fabien. Otú ọ dị, mmebi ihe onwunwe dị ukwuu na mpaghara ndị kachasị emetụta. Ọ bụ ezie na mmiri ozuzo na-adịwanye njọ, ndekọ ikpeazụ nke oké ifufe a ga-enwe karịrị 60mm na 24 awa na isi ihe mmịpụta AEMET. Enwetara ndekọ na Grazalema ebe a chịkọtara 145.2 mm na ụbọchị 21.
N’iburu n’uche na site na Disemba 16 ruo 22 enwere ikuku zonal dị ike ma na-asọda n’elu peninsula ahụ n’izu ahụ niile. N'etiti ha, oké ifufe nke Daniel, Elsa na Fabián mere n'usoro, na mmiri ozuzo buru ibu.
Echiche nke bọmbụ ihu igwe ma ọ bụ ihe mgbawa nke cyclogenesis abụghị ihe mgbasa ozi mepụtara. Ha bụ okwu ndị amụrụ na mpaghara sayensị ma nwee ọtụtụ akụkọ ntolite. Ndị na-ahụ maka ihu igwe bidoro zoo aka n'ụdị oke ifufe a nwere nkọwa dị ka ihe mgbawa ma ọ bụ aha, na-akpọ ha bọmbụ. Echiche a siri n'ụlọ akwụkwọ Bergen dị na Norway, ebe ndị nna nna nke mmụta ihu igwe n'oge a kuziri, wee bụrụ onye ama ama mgbe mmadụ abụọ gbasara ihu igwe si Massachusetts Institute of Technology kpọtụrụ ya n'isiokwu na 1980. iji kọwaa ajọ mmiri ozuzo nke tụfuru karịa milliba 24 nke nrụgide n'otu ụbọchị, dịka ọ mere na Fabien, onye ndị Mlọ Ọrụ Ihu Igwe na-ahọpụta.
Site na mgbanwe ihu igwe, a na-eche na ịdọ aka na ntị na-acha uhie uhie ga-ewere ọnọdụ karịa ma ọ bụ obere kwa afọ 3 dabere na mgbanwe ihu igwe anyị ga-atụle mgbe anyị na-amụ oké ifufe. Otu n'ime ihe ndị ahụ na-echebe anyị n'ókèala anyị bụ anticyclone nke Azores. Ọ bụ nnukwu anticyclone nke na-akwụsị enyemaka oke ifufe niile. N'ezie, ọ bụ ihe butere ịkwụsị oke ifufe a site na 22nd.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke mmiri Fabien, mmalite ya na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Squall Fabien